Tsy mandeha amin’ny laoniny ny voka-pifidianana: nisintaka tao amin’ny Ceni ny solontenan’ny kandidà Rajoelina | NewsMada
Tsy mandeha amin’ny laoniny ny voka-pifidianana: nisintaka tao amin’ny Ceni ny solontenan’ny kandidà Rajoelina
Nitranga ny nampoizina noho ny fomba fiasa. Nanapa-kevitra ny hisintaka tsy ho eo anivon’ny Ceni ireo ekipa solontenan’ny kandidà Rajoelina. Nahatsapa izy ireo fa tsy mandeha amin’ny laoniny sy ny tokony ho izy ny famoahana ny voka-pifidianana.
Mazava ny fanambarana. “Tsy afaka manamarina ny voka-pifidianana avoakan’ny Ceni izahay. Mihataka amin’ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny fanisam-bato ihany koa”, hoy izy ireo, omaly. Notsiahivin’izy ireo fa nijanona teny amin’ny Ceni Alarobia andro aman’alina izy ireo, nanomboka ny 7 novambra lasa teo, andro nanaovana ny fifidianana. Nanao ny dingana rehetra ahafahana manatanteraka antsakany sy andavany izany fanaraha-maso ny fanisam-bato izany.
Tsy nijanona teo anefa, “Nolavina ny fangatahana an-taratasy sy am-bava hanara-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana, indrindra fa eo amin’ny lafiny informatika”, hoy ihany izy ireo.
Tsy misy mangaraharaha ny lafiny informatika
Nahatsapa koa ireto solontenan’ny kandidà laharana faha-13 ireto fa tsy feno ny fepetra ahafahana manara-maso ny fanisam-bato ataon’ny Ceni. “Tsy mangaraharaha ny fikirakirana ny eo amin’ny lafiny informatika misy eto anivon’ny Ceni. Sarotra ny ametrahana fitokisana amin’ny voka-pifidianana vonjimaika mivoaka amin’izao fotoana izao”, hoy ihany ny fanambaran’izy ireo.
Araka izany, tsy mandeha ho azy izao fanapahan-kevitra noraisin’ny solontenan’ny kandidà Rajoelina izao. Efa maro ireo nametraka ahiahy, hatramin’ny nanombohan’ny fanisam-bato ny alin’ny 7 novambra. Efa tamin’ny maneno akoho vao tonga ny voka-pifidianana. Misy koa kandidà tsy nihetsika tao an-trano ary tsy nanao propagandy nivoaka nefa nahazo vato marobe. Eo koa ny fitomboan’isan’ireo vato maty sy fotsy. Efa maherin’ny roa hetsy izany. Nidina hatrany ny salanisan’ireo kandidà roa voalohany ary misoko mangina miakatra tsikelikely ny kandidà hafa aty aoriana.
Tsy mazava ny ao ambadik’izao sy ny tiana ahatongavana
Manampy ireo, ny tsy fahazoana ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato eny amin’ny Ceni. Zara fa mandalo dimy segondra eo amin’ny solosaina izany ka tsy ahafahana manamarina ny voka-pifidianana miseho eo ka tsy ahafahana manao ny fampitahana amin’ny fitanana an-tsoratra (PV) any amin’ny kandidà.
Tsy vitan’izany fa nahazo vato anjatony izao ny kandidà sasany eny amin’ny birao fandatsaham-bato iray eto an-drenivohitra. Aotra na tsy manana vato na iray aza anefa rehefa eny anivon’ny Ceni. Tsy mazava ny ao ambadik’izao raharaha izao ary inona ny tiana ahatongavana. Aiza ny olana ? Mety hampanahy ny ho tohiny raha tsy misy fepetra haingana raisin’ny tompon’andraikitra mikarakara ny fifidianana.